IIPANELI EZIMBINI ZEMARVEL ZIBHENGEZWE KUMNYHADALA WE-D23 - HOLLYWOOD
Esikhundleni saso nasiphi na isihlandlo somntu kule yr, iNdlu yeMouse ibamba i-intanethi isiganeko se-D23 yedijithali ebandakanya inkampani kuzo zonke iimbombo zenkampani. Oko kubonisa ubukho obuvela kuMmangaliso, ngaphakathi kohlobo lweepaneli ezimbini-enye egxile kulandelelwano oluzayo lweDisney + kunye nenye njengenqaku lomnye wabalinganiswa abashushu ababhali. Umbhiyozo weD23 weHlabathi oMangalisayo wenzeka ngoNovemba weshumi elinesithandathu ngendlela yamashumi amabini kwaye unokuba uphawu lweMarvel's 616 Uncovered kunye neMarvel Comics ibhiyozela iminyaka engama-80 yeCaptain America.
Zombini zenzeka ngolwesiBini, nge-17 kuNovemba Ukumangalisa kwe-616 ukuqala ngo-5: 00 p.m. EMpuma kunye neCaptain America ibalaselisa ukulandela iyure kamva.
Jonga okwahlukileyo kuqala jonga kolu luhlu lutsha lweDisney + oluchulumancisayo kunye nabavelisi abaLawulayo uSarah Amos noJason Sterman, kunye nabaLawuli uClay Jeter kunye noBrian Oakes ukufumana umbono kwezi ntsomi zikhethekileyo, zibonisa iindlela ezinqamlezileyo zokubalisa amabali, inkcubeko edumileyo kunye nefandom Kuyo yonke iMarvel Universe, isibhengezo esisungulwe ngumbutho uthi. Ukumangalisa kwe-616 ii-premieres ngoNovemba wamashumi amabini kwaye iveliswa ngokuyinxenye nguMarvel New Media.
Xa ibandakanya ukuqaqanjelwa kweCaptain America, ibango linikezela, Uhambo iminyaka esibhozo ukwenziwa! UMarvel Comics Umhleli weNtloko u-Cebulski kunye noMhleli oLawulayo u-Tom Brevoort njengoko bejonga uMphindezeli we-All-American ngokusebenzisa ii-comics, inkcubeko eyaziwayo, kunye nomboniso omkhulu!
holly kumzalwana omkhulu
Umsitho uya kubanjwa ngokupheleleyo kwi-intanethi kwaye uya kunikwa abo bangamalungu e-D23 Gold kunye neGold Family. Ifemu yongeze ikhonkco yenguqu ethintelweyo ebekelwe abalandeli ababhalisela ubulungu beGolide ngenxa yomsitho. Kaninzi Ulwazi kwezi zikhonkwane lunokufumaneka apha .
Inkqubo ye- Idabi leenkwenkwezi I-franchise inokuba nokubakho kwii-D23 zeHlabathi eziMnandi, ukuthengisa ipaki yomxholo we-Galaxy's Edge kwiphaneli enesihloko Idabi leenkwenkwezi: I-Galaxy's Edge-Ukubalisa amabali ngeendlela zoRhwebo.
Inkcazo yepaneli yepaneli yomxholo wepaki efundwayo, Dibana neqela leDisney Theme Park Merchandising encedisa ukuhambisa iBatuu ebomini njengoko ifumanisa ukubalisa ibali elityebileyo elingena kuthengiso oluyingqayizivele nolunyanisekileyo lwe-Star Wars: I-Galaxy's Edge!
ixesha elitsha ukubala ixesha eliphambili
Ezinye iipaneli zamkela ukukhanya kwimicrosoft Mouse, EPCOT, kunye Ibali lethoyi . Inkqubo ye- ishedyuli epheleleyo inokubonwa apha .
Gquma ifoto nguRafael Henrique / SOPA Imifanekiso / LightRocket ngendlela yeGetty Images
Izigaba: Hollywood Iindaba Tech-Iindaba
Iimuvi ezimnyama zemfundo kwi-netflix
ophumelele amandla e-veto kumzalwana omkhulu ngokuhlwanje
Umtsalane isixeko ookumkani ukubukela movie
UGordon peter getty jr
Kang ye bin kushushu
U-kathy reichs amathambo acwangcisiweyo